Welded Mesh, Welded Wire Mesh, Stainless Simbi Waya - Yuze
Stainless Simbi Square Yakarukwa Mesh
Stainless Simbi Vashanu Heddle Weave Mesh
Stainless Simbi Crimped Weave Mesh
Stainless Steel Wire (Flexible Hose Media)
Imwe Alloy Yakarukwa Mesh
Mhangura, Brass & Bronze Wire Mesh
Mesh Kuwedzera Kugadzira Zvigadzirwa
Stainless Simbi Screen Tube
Stainless simbi waya ine yakanaka ductility, yakakwirira tensile simba uye inogara kwenguva refu mukushandiswa, yakakwirira flexible, abrasion resistance uye corrosion resistance, yunifomu dhayamita, yakatsetseka pamusoro, inopenya ruvara, ect. Stainless Steel Wire(Mesh Weaving) Parameters: Waya dhayamita: φ0.10-φ4.00 mm Chigadzirwa giredhi: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, nezvimwewo. Chiyero: ASTM, GB,DIN,JIS Kusimba kwesimba: 600N/mm2-800N/mm2 Zvishandiso: 70% yeYuze Stainless Steel hydrogen annealing waya yedu inonyanya kuiswa mumes...
Zvimiro: Waya yesimbi isina tsvina ine yakanaka ductility, yakakwirira kusimba simba uye inogara kwenguva refu mukushandiswa, yakakwirira kuchinjika, abrasion kuramba uye kushora kuramba, yunifomu dhayamita, yakatsetseka pamusoro, inopenya ruvara, ect. Stainless simbi waya Parameters: Wire dhayamita: φ0.10-φ4.00 mm Material giredhi: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, etc. Standard: ASTM, GB,DIN,JIS Tensile simba:600N / mm2-800N/mm2 Stainless simbi waya Zvishandiso: Yuze Stainless Steel hydrogen annealing waya inoshandiswa seinochinjika...
Simbi isina waya mesh yakashandiswa zvakanyanya mumakemikari, petrochemical uye oiri kutsvaga, zvekufambisa, indasitiri yenyukireya, simba, machira, aerospace, zvemagetsi, mapepa emishonga ezvekudya uye mamwe maindasitiri, mune dzimwe nzvimbo kana kusave chinhu chakakosha chinotsiviwa nesimbi. Uye zvakare, iyo sub-mesh sta-isina simbi uye yekushongedza uye iri nyore kuchenesa uye antbacterial zvivakwa, mune yevatengi chikamu yakashandiswa zvakanyanya, senge kuvaka uye kushongedza, kitc ...
Stainless Steel Square Woven Mesh inonyanya kusanganisira yakajairwa Plain / Twill Weave Mesh; kubva pa1mesh kusvika ku635mesh; "Tensile Bolt" Bolting Mucheka; Crimped Mesh uye Welded Mesh. Regular Plain / Twill Weave Mesh uye ”Tensile Bolt “ Bolting Jira rinowanzo shandiswa maindasitiri. Yese iyo Square mesh yemhando yekudzora yakavakirwa paASTM E 2016-15 Yakajairwa uye mbishi zvinhu zvakavakirwa paASTM A580-14 chiyero. Raw material Giredhi: 304, 304L, 316, 316L, 430, etc. General inoshandiswa mumashandisirwo akasiyana: · Sizing...
Yuze inogadzira machira ewaya echinyakare kuti asangane nekusefa kwevatengi. Dutch weave sefa mesh inopa epamusoro kusefa kugona kweakasiyana maapplication, anosanganisira kudzvanywa, mafuta emafuta uye emvura mafirita eaerospace, petrochemical, mishonga, migodhi uye tsvina maindasitiri ekurapa mvura. Simbi isina simbi inoshingirira kupisa, asidhi, ngura uye kupfeka. Nekuda kwehunhu uhu, simbi isina tsvina mesh inoshandiswa zvakanyanya mumigodhi, makemikari, chikafu, peturu, mushonga, nezvimwe, ...
Stainless Simbi shanu Heddle Weave Mesh inopa rectangular kuvhura. Iyo yakasarudzika dhizaini yeiyi mesh inogona kubatsira kuwedzera kwemvura uye kuyerera zvivakwa. Iyi mesh zvakare ine nzvimbo yakatsetseka kune rimwe divi, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukusefa kwepetroleum makemikari maindasitiri, muchimiro chefirita ribhoni uye mafirita zvinhu. Stainless Steel Five Heddle Weave Mesh Zvimiro 1. Inopa kuvhurika kwerectangular 2. Kunatsiridza madhiraini uye kuyerera maficha 3. Inopa nzvimbo yakatsetseka kuitira kubviswa nyore kwesefa ca...
Stainless Simbi Crimped Wire Mesh inogadzirwa mumhando dzakasiyana siyana kuburikidza necrimping mesh muchina, rudzi rwewaya zvigadzirwa zvepasirese zvine sikweya kana rectangular kuvhurwa. Stainless Simbi Crimped Wire Mesh inogonawo kuzivikanwa sesimbi crimped mesh, Stainless simbi yakashongedzwa mesh, dema simbi crimped mesh zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana. Yuze inonyanya kupa Stainless Steel Crimped Wire Mesh Material: 302,304,304L,316,316L Zvimiro: Chimiro chakasimba uye chakasimba Chimiro cheCrimped: Stainless Simbi Yakarimwa ...
Stainless Steel Welded Wire Mesh inogadzirwa neplatoon welding. Stainless Steel Welded wire mesh inoiswa welded nemhando yepamusoro yakaderera kabhoni simbi waya uye yobva yapfuudzwa uye yaiswa plasticized neinotonhora plating, inopisa plating uye PVC coating. Stainless Steel Welded waya mesh yakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi isina waya. Iyo yakawanda acid proof, alkali inodzivirira, yakasimba welded, yakanaka uye inoshandiswa zvakanyanya. Stainless Steel Welded Wire Mesh Details: Stainless Steel Welded Wire Mesh Hunhu: yakanakisa co ...
YUZE WIRE MESH CO., LTD inyanzvi yesimbi isina tsvina inogadzira waya & waya mesh inogadzira muAnping, China kubvira 1986. Kukosha kwedu kwegore negore kunodarika mamiriyoni makumi mana emadhora; 80% yezvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika makumi matatu nematunhu.
Tine mafekitari matatu nehofisi yebazi imwe; nehwerengedzo inodarika 200 tsvimbo: Imwe Stainless Steel Wire Rod fekitori; Imwe Stainless Steel Wire Drawing fekitari; Imwe Mesh Weaving fekitari; Imwe hofisi yeBazi muShijiazhuang.
Yuze yakawana ISO quality system: GB/T19001-2016 /ISO9001:2015 inova ndiyo hwaro hwezvinhu zvekutenga zvinhu, kugadzira maitiro uye kutonga kwemhando.
Yuze ane mafekitari matatu nehofisi yebazi imwe chete, ine vashandi vanopfuura mazana maviri
Yuze mafekitori oparesheni akatanga kubva mugore ra1986 uye bhizinesi rekunze rakatanga kubva mugore ra2005
Yuze anowana mukurumbira wepamusoro kubva kune mhiri kwemakungwa uye vatengi vepamba, isu tinovimbisa kupa zvirinani sevhisi uye zvigadzirwa zvinokwikwidza kune vatinoshanda navo bhizinesi.
New spooling muchina online
Munguva pfupi yapfuura, seti nyowani yemuchina wekutsvaira uri kutumirwa zviri pamutemo kuiswa mukugadzirwa mukambani yeYuze. Muchina uyu unogona kushandisa PL, PT uye NP akateedzana spools mhando, izvo zvinowedzera kupfumisa kurongedza kwedu. Parizvino, tinogona kupa spools kurongedza sezvinotevera: Ndokumbira utibate kana uine chero zvaunoda kana ...
Nzvimbo yekuchengetera yeStainless Steel Mesh Yakakosha
Stainless simbi mesh imhando yewaya-inodzivirira simbi yesimbi, iyo isina kana ngura zvachose, uye kuita kwayo ngura mumakemikari media haina kugadzikana. Kupokana kwekuora kwesimbi isina waya mesh kunokanganiswa nemakemikari ayo akadai nickel, chromium, mupurisa ...
Tikugamuchirei mose kuti mushanyire Yuze
Pandakaongorora mufananidzo wekushanya kwevatengi, ndakarangarira vatengi vekuKorea neAustralia vakashanyira chitoro chedu chebasa ndokuita imwe nhaurirano muimba yedu yekusanganira. Yakanga iri ndangariro yakanaka kuti vashanyi vese nevashandi vehukama vekambani vakapinda muhurukuro uye zvichave. basa rakanaka kunzwisisa ...
Sravana Sameeralu Serial 4th Turkey Exhibition
Inzira yakanaka yekusimudzira kana mutengi achitiona mune zvimwe zviratidzo, kunyanya kumwe kuratidzwa kwehunyanzvi, idzo hama dzine zvigadzirwa uye zvigadzirwa application.
Yuze Factory Kero:
Maodzanyemba Zhengrao Road Anping County, Hebei China
Kero yeHofisi yeBazi yeYuze:
simbi isina tsvina yakarukwa mesh, 20mesh Stainless Steel Wire Mesh Sefa Disc, Stainless Steel Wire Mesh Masefa Disc, waya, 316 Stainless Simbi Wire Mesh Sefa Disc, 316 simbi isina tsvina waya,